VaDzvokora Vokurudzira Vana veZimbabwe Vari Kunze Kuti Vabatsire Mukugadzirisa Zvinhu Kumusha
Mumwe wevari kushanda mukugadzirisa ramangwana rinotarisirwa ndaVaTawanda Dzvokora, avo vanozviti Chief Svosve.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvakawanda zvinoramba zviine shuviro yekuti zvinhu kumusha zvichanaka nerimwe zuva.
Asi pahuwandu hwazvo, zvimwe ndizvo zviri kubatawo nepazvinogona napo mukuedza kuti hutongi hwejechetere huri kutarisirwa nevakawanda huitike nekukasika.
Mumwe wevari kushanda mukugadzirisa ramangwana rinotarisirwa iri ndaVaTawanda Dzvokora, avo vanozviti Chief Svosve. Vanoti hapana chinombonakidza pakugara kunze kwenyika.
“Ini ndiri munhu wekumusha, saka ndinoramba ndichitarisira kuti zvinhu zvichanaka chete, asi kwete nekuti vanhu vari kumusha chete ndivo vanofanirwa kushanda asi kuti kana nesuwo tiri mu diaspora,” vanodaro VaDzvokora.
VaDzvokora, avo vaimbove murairidzi vakambodzidzisawo munyika yeBotswana vasati vasunga twavo nemhuri yavo vakananga kuUnited States of America kudunhu reNorth Dakota uko kwavakasvikopinda munyaya dzemhando dzemoto vachisiya zvekubata choko.
“Ndagara mu diaspora kwe 15 years, 10 ndiri kuBotswana then five ndiri muno umu, asi pfungwa dzinenge dzingori kumusha nekuti muno tiri musango. Saka kare vakuru vaiti kunonzi kutetereka.”
VaDzvokora, avo vane makore makumi mana nemashanu ekuberekwa, ndivo zvakare mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato rinopikisa hurumende reZimbabwe First iro rinotungamirwa naVaMaxwell Zeb Shumba.
Ndivo zvakare munyori anoona nezvekuburitswa kwemashoko mumubatanidzwa wemapato anopikisa weNational Electoral Reform Agenda, kana kuti NERA, vachimirira bato ravo reZim First, uyo uri kurwira kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena.
Vanoti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vanofanirwa kuitawo pavo mukuwedzera kuti zvinhu zvikasike.
Kumusha vanoti vari kubatsirawo nekutumira mbatya, chikafu nezvimwe zvakadaro kuburikidza nechechi yavo yeZimbabwe Methodist Church.
“Gore rega rega tinotumira munhu kumusha anonogovera zvinhu zvatinenge taunganidza pamwe nekutenga,” VaDzvokora vanodaro.
Vanoti vari kutenga dzimba kumusha senzira yekuunganidza nayo hupfumi uye pari zvino vari kuvaka imba yekuti vari parwendo vanogona kurara kana kuti lodge kuChinhoyi.